Pigmentiin waan qalamu ifaa isaa irratti (amh) antsabaraqu jijjiru dha, kunis waan qalamu fillaxe xuxuuf. Dalagaan kunii immo fluorescence, phosphorescence, fi gossa biraa luminescence, kan waantichinu ifaa ofii kessa basuu irra gargari jirra. Waantonni bayeen fillanodhan wavelength ifaa hanga ta'ee xuxuu. Waantonni ilmen nama fillate fi midhasite akka pigmentiit fayyadamtu ammalaa adda ta'ee kan akka waan biraa qalamu jijjiru danda'an isaan dandesisuu qabu. Pigmentiin kuniis humna yokan jabenya tinting gudda kan waantotta isaan guilarmo qalayyadamatu yfiin olmaan kkantolaq delhaatu masqii fantol kan qalamu jijjiranii calluu qabachu qabu. Akkasumas temprature kara hundan argamu kessatti, akkata solid kessatti ofii danda'ee jirrachuu qabachu danda'a.
Ultramarine pigment umamaa akkataa duqetiin
Ultramarine pigmentiin namaan midhafame yoo chemicalumma isaa ilalanii ultramarine umamaa wajiin wal-fakkataa
Dalagaa industry fi akkasumas arts yokan barnotta fakki kessatti, ofii danda'u fi osoo hin jijjiramiin argamuun amalla (property) bayye barbadamu dha. Pigmentiin jijjiraman yokan kan permanent hin tanee fugitive jedhamanii bekamuu. Fugitive pigments kan jedhaman kuni akkumaa yeroon darbuun yokan yoo ifaan walit dhufaan ni baduu, isaan tokko tokko immo akkanumatti gurata'u.
Pigments kan fayyadaman dibba, qallamu, plastik, uffataa, cosmetics, nyatta fi waanen biraa qallamu dibuuf. Pigmentonni bayeen midhafama industry fi visual arts kessatti tajajilaman colourant gogogga yoo ta'anii, isaanis kan yeroo bayye dakamani akka duqetit argamanii dha. Duqetonni kunii waan qo'anoof tajajilamuu (vehicle yokan matrix) kan qalamu hin qabne kessatti naqama.
Garagarumaan yeroo bayee immo pigmentotta jidutti ni godhama, kunis kan vehicle kessatti hin makamne, fi dye kan fesashi yokan immo vehicle kessatti makama ta'ee dha. Colorantiin tokko pigmentille qallamulle (dye) ta'uu ni danda'a kuniis vehicle tajajilamee irratti hunda'udhan. Akkataa tokko tokkot, pigmentiin qallamu (dye) irra akkataa Jabba-ummu qallamu (dye) makama fi sodaa sibilla (metallic) wajiin ta'uu irra umamuu ni danda'a.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Pigment&oldid=25984" irraa kan fudhatame
Last edited on 30 Haggaya 2014, at 16:00
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 30 Haggaya 2014, sa'aa 16:00 irratti.